Sababtii Uu Massimiliano Allegri Iskaga Diiday Chelsea, Arsenal, PSG Iyo Real Madrid Oo La Shaaciyey | Laacibnet.net
HomeSerie ASababtii Uu Massimiliano Allegri Iskaga Diiday Chelsea, Arsenal, PSG Iyo Real Madrid Oo La Shaaciyey
Sababtii Uu Massimiliano Allegri Iskaga Diiday Chelsea, Arsenal, PSG Iyo Real Madrid Oo La Shaaciyey
Massimiliano Allegri waxa uu waqti guulo ah lasoo qaatay Juventus oo uu ku hoggaamiyey horyaalka Serie A dhawr sannadood oo isku xigta waxaana uga horreysay AC Milan oo sagaal sannadood muddo laga joogo uu kula guuleystay ka hor intii aanu Juventus la wareegin.
Tababarahan Talyaaniga ah ayaa labadii sannadood ee ugu dambeeyey aan qabanin wax shaqo ah, laakiin haddana ma ahayn dalab la’aan, waxaana mar walba hor yaallay codsiyo uga imanayey kooxo kale.
Allegri ayaa helay fursad uu tababare ugu noqdo kooxda reer Spain ee Real Madrid oo u yeedhatay markii uu Zinedine Zidane iska casilay, sidoo kalena ay niyad-jab ku dhamaysteen Julen Lopetegui iyo Santiago Solari, hase yeeshee waxa uu Massimiliano Allegri iska diiday inuu tago waddanka Spain.
Waxa kale oo uu dalabyo ka helay Chelsea, PSG iyo Arsenal oo dhamaantood doonayay inuu tababare u noqdo xilliyo ay caydhiyeen macallimiintoodii hore, isla markaana ay raadinayeen tababareyaal cusub.
Giovanni Galeone oo ay saaxiibbo dhow yihiin Massimiliano Allegri ayaa daboolka ka daaday sababtii uu tababarahani u diiday kooxahan, waxaanu yidhi: “Sababtu way fududdahay. Waxa jiray dhibaatooyin halis ah oo qoyskiisa ah, waxaanay ahayd inuu ‘Maya’ ku yidhaahdo kooxaha waaweyn.
“Waxa uu ‘Maya’ ku yidhi Chelsea, Arsenal iyo Real Madrid. Waxa kale oo uu hoosta dhigay dalabkii PSG.
“Wuxuu iska diiday Real Madrid sababtoo ah wuxuu horeba usoo diiday kooxo kale oo ka horreeyey.
“Aniga ayaa weydiiyey ‘sidee ayaad u diidi kartaa kooxda sidan u weyn (Real Madrid?’, waxaanu iigu jawaabay si iga yaabisay. Wuxuu igu yidhi ‘anigu ma ihi doqon, maadaama aan diiday inaan tababare u noqdo kooxo kale, sidee ayaan toban maalmood kaddiib u aqbalayaa dalabkan (Real Madrid).’
“Allegri waa nin daacad ah, maskax badan oo xirfadle ah. Hadda ayaanu diyaar u yahay inuu soo laabto, waxaanu doonayaa inuu koox weyn maamulo.”